Midowga Musharixiinta” Madaxweyne hore Farmaajo waa dambiile Qaran” - Awdinle Online
Midowga Musharixiinta” Madaxweyne hore Farmaajo waa dambiile Qaran”
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay inay joogteyn doonaan bannaan baxyada, si ay shacabka u muujiyaan rabitaankooda iyo in dalka aysan ka abuurmin diktaatooriyad.
“Golaha Midowga Musharaxiinta waxay horay u aaminsanaayeen haddana u cadaatay in Madaxweyne hore Farmaajo uusan nabad iyo xasillooni u rabin dalka, daacadna ka aheyn inuu galo doorasho loo siman yahay, waxay maaweelayaashiisa siyaasadeed iyo hawadiisa beenta ah tustay in awoodda dalka xoog ku heysan karo sharci darrana ku sii joogi karo ayaa lagu yiri” Qoraalka Musharixiinta.
Sidoo kale Midowga Musharixiinta waxaa ay sheegeen inay horay u aaminsanaayeen haddana u cadaatay in Madaxweyne hore Farmaajo uusan nabad iyo xasillooni u rabin dalka, daacadna ka aheyn inuu galo doorasho loo siman yahay.
Ugu dambeyn waxaa ay sheegeen in Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u arkaan in uu yahay dambiile Qaran uusan sinabada qeyb uga noqon karin xal u helida siyaasada dalka kala-guurka ah, loona diido in uu ka qeyb-galo doorashada sida uu qabo Dastuurka Kumeel gaarka ah.
Previous articleXukun lagu riday dhalinyaro kufsi u geystay Gabar 13 jir ah
Next articleCiidanka Puntland oo Baadi Goobaya maleeshiyaad rabshado wada